Norwey:- Imitixaanaadkii qoraalka ahaa ee Dugsiyada dhexe iyo kuwa sare oo la baajiyay. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Norwey:- Imitixaanaadkii qoraalka ahaa ee Dugsiyada dhexe iyo kuwa sare oo la...
Norwey:- Imitixaanaadkii qoraalka ahaa ee Dugsiyada dhexe iyo kuwa sare oo la baajiyay.
Norwey:- Xukuumada Norwey ayaa gabi ahaanba joojisay ixmtixaanaadkii sare ee ardeyda dugisyada dhexe iyo sare ee Norwey kadib markii dhowr degmo oo Norwey ka mid ah uu ku sii fiday Feyruska cusub ee karoona kadib markii mudooyinkii u dambeeyay loo soo jeediyay xukuumada in la baajiyo imtixaanka.
Shir jaraa`id oo ay qabatay maanta abaaro 11-kii duhurnimo ayay ku sheegtay wasiirada waxbarashada iyo is dhexgalka xukuumadda Norwey in la baajiyay imtixaanaadkii qoraalka ahaa ee dugsiyada dhexe iyo sare ee Norwey.
Wasiirka waxbarashada Guri Melby ayaa shirkeeda ku sheegtay in cudurka faafa uu shaki la’aan u horseeday ardayda inay helaan noocyo waxbarasho oo kala duwan sidaasi awgeedna ay xukuumadu go,aansatay in la joojiyo imtuxaanada qoraalka ah.
“Waxaan sidoo kale joojineynaa imtaxaanka maxaliga ah ee qoran ee ardayda dhigata dugsiga sare, Xitaa haddii imtixaannada qoraalka la joojiyo, waxaa la qorsheynayaa in la dhammaystiro imtixaannada afka ee ardayda ka qalin-jabineysa dugsiga sare iyo fasalka 10-aad.” ayay tiri Guri.
Waxa ay intaasi raacisay in ay jiraan caqabado badan oo la xiriira imtixaanka afka inta lagu jiroXadaalada cakiran ee covid 19, wallow ay aaminsantahay in loo baahanyahay in la qabto imtixaan si ardeydu ay u helaan shahaadooyinkooda.
Isbuuca 22 ayay sheegtay xukuumadu in la cadeyn doono ardeyda qaadaneysa imtixaanaadka afka halka isbuuca 23 aadna la go,aamin dooni natiijooyinka ardeydu ay heleen, waxeyna Melby sheegtay in ay la kaashi la sameyn doonto waaxda waxbarashada si ardeyda ay u helaaan xaqiijin dhab ah oo waxbnarashadooda ah.
“Waa muhiim, in nabadgelyada sharciga ee ardayda la ilaaliyo intii suurtagal ah xitaa haddii aan ku jirno masiibo, ayay tiri” Guri.
Axsaabta siyaasadda Norwey ayaa ku kala aragti duwaanaday baajinta imtixaanada ardeyda iyadoo xibiyada SV iyo AP ay Barlamanka horay uga codsadeen in la joojiyo imtixaanka halka xisbiyo kale oo uu ka mid yahay Frp uu isna soo jeediyay aragti ka duwan taas oo ah in la ilaaliyo hanaanka waxbarashada Norwey loona baahneyn xiligaan in la baajiyo imtixaanaadkii lagu kala saari lahaa ardeyda mudada wax soo baraneysay.
Xigashada warka NRK
Previous articlePST:- Khatarta Islaamiyiinta iyo xagjirka kale ayaa sii xoogeysatay.
Next articleSOOMAALIYA WAXAA KA MUUQDA BISEYL SIYAASADEED OO BILOW AH.